Su’aallo Shaki badan dhaliyay oo laga keenay weerarkii lagu dili rabay Odawaa | KEYDMEDIA ONLINE
Su’aallo Shaki badan dhaliyay oo laga keenay weerarkii lagu dili rabay Odawaa
Inta badan qaraxyada iyo dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho waxaa sheegta Al-Shabaab, balse khuburada amniga ayaa aaminsan in ay gacmo kale jiraan oo fududeeya.
Muqdisho, Soomaaliya – Su'aalo badan ayaa laga keenay weerarkii shalay duhurkii lala beegsaday kolonyo galbineysay taliyaha Ciidamada xoogga dalka Generaal Odawaa Yuusuf Raage oo mareysay agagaarka Isbitaalka Xoogga, oo ku yaalla nawaaxiga Isgoyska Tarabuunka.
Odawaa oo xilligaas ka yimid Wasaaradda Gaashaandhiga ayaa ku wajahnaa xarun cusub oo ciidamada lagu tababaro oo aan magaceeda la sheegin, waxaana ilaalinayay afar gaadiid oo nooca Cabdilaha loo yaqaan, kuwaas oo horey iyo gadaal ka socday.
Gaariga isku qarxiyay oo noociisa ahaa Suruf waxlaxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa la sheegay in uu kaga soo dhacay wada dhinaceeda, isla markaan soo aabaray gaariga Generaalka, haseyeeshee ilaada taliyaha rasaas huwiyeen, kadibna qarxay.
Weerarka waxaa ku dhaawacmay sarkaalkii ilaada Odawaa iyo darawalkii gaariga u weday, sida ay Keydmedia Online u xaqiijiyeen saraalkiil ka tirsan hay’adaha amniga.
Odawaa Yuusuf raage oo habeen ka hor ka hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in magaalada ay ku jiraan gaadiid ay ku buufsantahay calaamada ciidamada xoogga dalka, kuwaas oo aan sharciyaysneyn, isagoona sheegay in lagala wareegi doono cidii lagu arko, khatarna ay ku yihiin amniga magaalada.
Dadka odorosa arrimaha amniga ayaa su’aalo badan ka keenay waxa isku soo aadiyay weerarka iyo hadalka Taliyaha, Suurta galnimada goobta qaraxa lagula eegtay iyo nooca qaraxa, Cida sheegtay in uu wadadaas marayay saacadaas ama ku beegnaa, Goobta uu ka soo baxayay iyo su’aalo kale.
Odawaa oo qaraxa kadib warbaahinta dowladda la hadlay ayaa sheegay in la khaarijin rabay, haseyeeshee uu ka bad baaday, howshiisana uu sii wadi doono.
Magaalada Muqdisho oo bilihii la soo dhaafay aheyd mid nabdooneed, ayaa waxaa maalmahaan ku soo badanayay qaraxyada lala beegsanayo masuuliyiinta dowladda, iyadoona waxyeelada ugu badan ay ka soo gaarto dad shacab ah oo aan waxba galabsan.